ဗေဒင် | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ဗေဒင်. Show all posts
ဧပြီလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
ဒီလအတွင်းမှ အဖက်ဖက်က အခြေအနေကောင်းတွေ ကြုံလာမယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အထူး တိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ကာလ သမယပါပဲ။ မိတ်ကောင်း ဆရာကောင်းတွေ တွေ့မယ်။စပ်တူ ရှယ်ရာ
အလုပ်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီး၊ ပညာရေးကိစ္စတွေ အထူးကောင်းပါတယ်။ ဆန်ဆီဆေးဆား၊ စက်မှု၊
စာအုပ်၊ မြေ ၊ အမွေ၊ ဖုန်း ကိစ္စများမှာ အောင်မြင်မယ်။
အလှူအတန်း မင်္ဂလာကိစ္စများနဲ့လည်း ကြုံကြိုက်ရတတ်ပါတယ်။
ဘာသာရေး လုပ်သလောက်၊ ကံပွင့်လန်း နေမယ့် ရက်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့
တော့ ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ လူရင်းတို့ရဲ့ မကောင်းသတင်းတချို့လည်း ကြားရတတ်ပါတယ်။
အထည် ၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ ရွှေ၊ အောက်လက်ငယ်သားတို့ အတွက်တော့ စိပ်ရှုပ်ခေါင်းစား ရတတ်ပါ
တယ်။ ချစ်သူရည်စားများ၊ ဆုံးဖြတ်ရ ခက်တဲ့ အခြေအနေ ကြုံလာမယ်။ အိမ်ထောင်ရှင် ဆိုရင် အညံ့များနေတတ်ပါတယ်။
ထီထိုးမယ်ဆိုရင် (၃၅)ပူးနေတဲ့ ထီလက်မှတ်ဟာ လာဘ်လာဘတွေ ခေါ်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒူး၊ နား၊ ရင်ဘတ်၊ သတိထားပါ။
ညံ့တာတွေပြေပျောက်၊ပြီး ကောင်းတာတွေ ပိုကောင်းလာစေဖို့အတွက် သံဃာတော်များကို ဆပ်ပြာမွှေးရှစ်ခု ကပ်လှူပါ။
ဒီလအတွင်းမှာ လုပ်ငန်းသစ်စခြင်း၊ နေရာပြောင်းခြင်း၊ အခြေအနေပြောင်းတဲ့ ကိစ္စများ အကျိုးပေး
အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးတွေ အောင်မြင်မယ်။ထွက်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ငွေတွေ
ပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ကွဲကွာနေသူများနဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းရတတ်တယ်။ အသီး၊ အနှံ ၊ သစ်၊ သွပ်၊
သံ ၊ ရေထွက်ကုန်၊ ရွှေ၊ အလှကုန်၊ လျှပ်စစ်ပစည်း၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေ၊ အောင်မြင်နိုင်သော အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကတော့ တအားဝင်ပြီး တအားထွက် နေမယ်။ ၀မ်းဗိုက်၊ ဦးခေါင်း၊ အဆစ်အမြစ်၊ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှင်များ၊ ချစ်သူရည်းစားများ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အခက်အခဲလေးတွေ ကြုံလာရ တတ်ပါ
တယ်။ ဘာမဆို အထစ်အငေါ့လေးတွေ ကြုံပေမယ့် အောင်မြင်နိုင်သောကိန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလအတွင်းမှာ ငွေကံ တအားကောင်းနေမယ်။ နာမည် ဂုဏ်သတင်း တက်စ
ရာတွေလည်း ကြုံမယ်။ နိုင်ငံခြားခရီး လူမျိုးခြားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေအကျိုးပေးအောင်မြင်
မယ်။ ၂၇- အတွဲလိုက်ပူးပြီးတော့ စတဲ့ ထီလက်မှတ်တွေ ထိုးသင့်ပါတယ်။
အထည်၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ ဓာတ်ပုံ၊ လျှပ်စစ်၊ ကား၊ ကွန်ပျူတာ၊ ကျောက်၊ ကင်မရာလုပ်ငန်းများ၊ တိုးချဲ့
မိသားစုထဲမှာ အလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဲဒိနေ့မှာ ထီဖိထိုးသင့်ပါတယ်။ စပ်တူ စာချုပ်ကိစ္စ တွေမှာတော့မရေမရာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မြေကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စ၊ ဖုန်းကိစ္စများကိုတော့
ခေတ္တဆိုင်းငံ့ ထားသင့်တဲ့အချိန်ပါပဲ ဘာမဆို နှစ်မျိုးနှစ်ခု ကြုံနိုင်ပါတယ်။ အာရုံကြော၊ ၀မ်းဗိုက်၊
ဆီး၊ မျက်စိရောဂါများ ဂရုစိုက်ရမယ့် ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ညံ့တာတွေ ပြေပျောက်ပြီး ကောင်းတာတွေ ပိုကောင်းလာစေဖို့အတွက် ဓာတ်ခဲကိုးလုံးကို ဘုရား
စင်ရှေ့တွင် တန်းစီချထား၍ ထိုအပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ကိုးတိုင် တင်ထွန်း၍ ဘုရားမီးပူဇော်ပါ။
ဒီလအတွင်းမှာ တအားပင်ပန်းမယ်။ စိတ်မောလူမောတွေ ဖြစ်ရမယ်။ အလုပ်ပိပြီး ကျန်းမာရေး
စိတ်တိုင်းမကျစရာတွေများနေမယ်။ တတ်နိုင်သမျှ စိတ်ရှည်ရှည် ခေါင်းအေးအေးနဲ့ အလုပ်တွေကို သက်တောင့်သက်သာလေး လုပ်သွားသင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ထွက်ချင် ပြောင်းချင်တဲ့ ဆန္ဒ ခေတ္တခဏလေး စောင့်သင့်ပါတယ်။
နေရာကိစ္စ အိမ်ကိစ္စများ တိုးလို့တန်းလန်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မိတ်ကောင်း ဆရာကောင်းတွေရဲ့ အကူအညီကောင်းတွေ ပေါ်လာမယ် နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်လို့အဆက်အသွယ်အခွင့်အရေးကောင်း
မြေ ၊ အမွေ ၊ ဖုန်း၊ အထည် ၊ထီး၊ ဖိနပ်၊ ဓာတ်ပုံ၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ အထူးအောင်မြင် အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ် ခြေထောက် ခါး အစာအိမ် ကျန်းမာရေး သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ညံ့တာတွေပြေပျောက် ကောင်းတာတွေ ပိုကောင်းလာဖို့အတွက် မုန့်ဖက်ထုပ်(၇) ထုပ် (သို့) နို့ထ
မင်း (၅)ပွဲ ဘုရားလှူပါ။
ဒီလအတွင်းမှာ ကံအညံ့လေးတွေ များနေပါတယ်။ အဖက်ဖက်က အနှောင့်အယှက် အယှက်ရှိမယ်။ ခရီးသွားခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးယတြာပါပဲ။ နေရာသစ်၊ အိမ်သစ်၊ လုပ်ငန်းသစ်၊ အစီအစဉ်များ အထူးပဲကောင်းပါတယ်။
ရပ်ဝေးပြည်ပကိစ္စတွေ အတွက်လည်း ဦးစားပေးပြီး စီစဉ်သင့်ပါတယ်။ ကွဲကွာနေသူများ ပြန်ဆုံခြင်း၊ ရပ်ဝေးကအကူအညီကောင်းရခြင်းများ ကြုံမယ်။ ငွေကတော့တအားဝင်သလို တအားထွက်နေလိမ့်
မထင်မှတ်တဲ့ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ အခွင့်အလမ်း ကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အသီးအနှံ၊ ရေထွက်ကုန်၊ သစ်၊ သံ ၊ သွတ်၊ အလုပ်များ တိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှင်များ၊ ချစ်သူရည်စားများ၊ ၇ပ်ဝေးခွဲရ ကိန်းရှိနေပါတယ်။
ဒီလအတွင်းမှာ အဆင်မပြေ လွဲချော်မှုတွေ များနေမယ်။ ဟိုဟာလုပ်ရတော့ မလိုလို ၊ဒီဟာ လုပ်ရ
တော့ မလိုလိုနဲ့ အချိန်ကုန် နေတတ်ပါတယ်။
ဘာမဆို စိတ်ရှည်သင့်တဲ့ အချိန်ပါပဲ။
လုပ်ငန်းသစ်စတာ တဖြေးဖြေးတိုးချဲ့တာ စပ်တူရှယ်ရာအလုပ် စာချုပ်လုပ်ငန်းတွေ ကောင်းပါတယ်။
ဆန်၊ ဆီ၊ ဆေး၊ ဆား၊ စက္ကူ။ စာအုပ်၊ အင်္ဂါနံတွေ အလုပ်ဖြစ်မယ်။
မထင်မှတ်ဘဲ အိမ်အလုပ်၊နေရာ၊ ရာထူး၊ ဆိုင်ခန်း၊ အခွင့်အရေးတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်နေတဲ့ အခွင့်အရေးကောင်း အဆက်အသွယ် ကောင်းတွေလည်း ရတတ်ပါတယ်။မိတ်ရင်း
ဆရာရင်း တို့ကြောင့် စိတ်ရှုပ် ရတတ်ပါတယ်။ ငွေကံကတော့ အတော်လေး နိမ့်နေပါတယ်။ ငွေများ
များ ရှိရင်လည်း ဆေးဖိုးဝါးခ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှင်များ၊ အဆင်မပြေမှုတွေ ပြေလည်သွား လိမ့်မယ်။ ချစ်သူရည်းစားများကတော့ ဆုံးဖြတ်
ရခက်တဲ့ အကျပ်အတည်းမျိုး ကြုံလာတတ်ပါတယ်။
ညံ့တာတွေ ပြေပျောက်ပြီး ကောင်းတာတွေ ပိုကောင်းလာစေဖို့အတွက် သြဇာသီး (၄) လုံး ဘုရား
လှူဒါန်း၍ လိုရာ ဆုတောင်းပါလေ။
လုပ်ငန်းဟောင်း နေရာဟောင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဟောင်းတွေနဲ့လည်း ပြန်လည် ဆုံဆည်းရ
ငွေ တအားရွှင်မယ်။ ရတနာပစ္စည်းတွေ အလှကုန် ပစ္စည်းတွေ တအားရွှင်မယ်။ ကား၊ ကျောက် ၊ ကွန်ပြူတာ၊ ကင်မရာ၊ ရွှေ၊ အလှကုန်လုပ်ငန်းတွေ အကျိုးပေးအောင်မြင်မယ်။
သူတစ်ပါး မနာလိုဖြစ်လောက်အောင် စီးပွားတက် အောင်မြင်မယ့် ကိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တမင် ရန်စနှောက်ယှက်တာ မျိုးတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ လူရင်း လူယုံ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ဘယ်
ကိစ္စမဆို အနှောင့်အယှက်လေးတွေ ကြုံပြီးမှ အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။
ချစ်သူရည်စားများအတွက် ကံကြမ္မာ အထူးပွင့်လင်းနေပြီး အိမ်ထောင်ရှင်များ အတွက်တော့ မ
တင်မကျ ကိစ္စလေးတွေ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
ထီဝါသနာရှင်များ အနေနှင့်ကတော့ ၂၄-၄၂-အတွဲလိုက်စတဲ့ ထီနံပါတ်ကို ဖိဖိစီးစီး ထိုးသင့်ပါ
မျှဝေသူ Unknown မှာ Wednesday, April 10, 2013
လူနက္ခတ်၊ နတ်နက္ခတ်၊ ဘီလူးနက္ခတ်
ဒါလေးတော့ သိထားရင် ကောင်းမယ်ပေါ့။ ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးပြုကြတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ဃဃနန မသိ။
ဒါကတော့ လူတိုင်း ကြားဖူးကြတယ်။ လူတွေလည်း အပြောများတယ်။
နင် ဘာနက္ခတ်လဲ။ ကွန်မ ချစ်သူက ဘီလူးနက္ခတ် ကျွန်မက လူနက္ခတ်ဆိုတော့။ ဆရာရယ် သမီးကို
ကယ်ပါ။ ကျွန်မ သူ့ကိုယူရင် အစားခံရမယ်ထင်တယ်။ ဆရာ ကယ်ပါ တဲ့။
သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ယူလို့ သင့်တော်ပါ့မလား ဆရာရယ်၊ နက္ခတ်မကိုက်ဘူးတဲ့။
ဘီလူးက လူကိုသာ စားနိုင်တာ ၊ နတ်ကိုတော့ အသေကြောက်တဲ့။ အိုး..အစုံပါပဲ။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော် ဘယ်လို လုပ်ရပါ့။ ဘယ်လို ဟောပေးရပါမလဲ။
တည့်တာ မတည့်တာ။ သင့်တာ မသင့်တာ အသာထား။ ဗေဒင်ဆရာပြောလို့ ကိုယ်အသက်မက ချစ်
တဲ့ချစ်သူကို မယူတဲ့ လက်မထပ်တဲ့ သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်တောင် မတွေ့ဘူးဘူး။
တကယ်ပါ။ ဗေဒင်ဆရာဖြစ်စတုန်းက စမ်းသတ်ပြီးသွားပြီ။ အိမ်ထောင်မပြုခင် ချစ်သူဘ၀က ကျွန်တော်
ဆီကို လာမေးကြတယ်။ မင်္ဂလာဇာတာ လာတိုက်ကြတာလေ။
အဲဒီတော့ ကိုဗေဒင်ဆရာကလည်း ခေါင်းကြီးကို ဗေဒင်တွက်တဲ့ စားပွဲကိုထိမတတ် ငုံ့လို့ပေါ့။ နည်းမျိုး
ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်တွေနဲ့ကို ဆန်းစစ်ကြည့်တာ။ တိုက်ဆိုင်ကြည့်တာ။ နောက်ဆုံး အဖြေက မကောင်း
ဘူး။ ယူလို့ မရဘူးပေါ့။ မဖြစ်ဘူးပေါ့။
အဲဒိတော့ ကိုယ်ကလည်း ခေါင်းလေးအသာမော့။ မျက်လုံးက လေး ပေကလပ် ပေကလပ်နဲ့။ အသံလေးကလည်း စိတ်မကောင်းတဲ့ လေသံကလေးနဲ့။
ပြောရမှာ စိတ်မကောင်း ဘူးဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ စုံတွဲ ယူလို့ မရဘူး၊ နေ့နံ မသင့်ဘူး။ နက္ခတ် မကိုက်ဘူးလို့ စိတ်မကောင်းတဲ့ လေသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။
ကိုယ့် စိတ်ထဲတော့ ဒီလို ပြောလိုက်မိတာ မကောင်းဘူးပေါ့။
အဲဒီတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်း မျက်နှာလေးတွေ မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။
ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်က လည်း ကျွန်တော်ကို တိုးတိတ်နာကျင်နေသော အသံလေးတွေနဲ့ ကျေး
ဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်ခွင့်ပြုပါဦးလို့ ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်ပြန်သွားကြတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ယောက်ထဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့တာ။
သြော် ... သူတို့လေးတွေ ငါဟောပေးလိုက်လို့ အပြစ်မရှိတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး ချစ်သောသူနှင့် ကွေကွင်းရတဲ့ ဒုက္ခကို နှစ်ယောက်အတူ ခံစားရတော့မှာပါလားလို့ တွေးမိရင်း နေ့စဉ်ရက်ဆက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေ
နောက်တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ကလေးအမည်ပေး လာတောင်းတယ်။
ကိုယ်ကတော့စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတာ။ သူတို့ကတော့ ကလေးတစ်ယောက်တောင် ရနေပြီ။
ဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့ ... ဗေဒင်ဆရာပြောလို့ မယူတဲ့လူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလို့လဲ၊ မရှိပါဘူး။
မိဘစကားတောင် နားမထောင်တာ၊ ဗေဒင်ဆရာပြောစကား နားထောင်ဖို့ ဝေးပါသေးတယ်။ ဟီးဟီး။ အဲဒီကတည်းက ပညာရခဲ့တာ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာက နက္ခတ်အကြောင်း ပြောတော့မယ်နော်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကြိုပြော ထားချင်တာက အိမ်ထောင်ရေးဇာတာတိုက်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။
ချစ်သူနှစ်ဦး ဇာတာတိုက်ဖို့ မဟုတ်ဘူးနော်။
ဒါဆို ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင် ... နက္ခတ်နဲ့ သူ့အကြိုက်။ ကိုယ့်အကြိုက် သိအောင်လုပ်တဲ့နည်း။
ဒီနည်းလေးက လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးအတွက်တော့ အရမ်းကောင်းတာ။ ကျွန်တော်တို့ အဘမင်းသိင်္ခ တပည့်တွေတိုင်း သိတယ်။ အသုံးပြုနေကျနည်းလေးပဲ။
ဒီနည်းလေးကို သိလိုက်တာနဲ့ သင်ဟာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင် ၊ သင့်မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကြားမှာ
အိုကေမှာ စိုပြေသွားစေရမယ်။ အာမခံတယ်။ မကောင်းဘူးလား။
အဲဒီတော့ ပထမဆုံး နက္ခတ်ဘယ်လိုတွက်သလဲ စလိုက်ကြအောင်။ လွယ်ပါတယ်။ တော်တော်လေးကို လွယ်ပါတယ်။ (၃) အလီရတာနဲ့ကို ရပြီ။
မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို (၃) နဲ့စားပါ။
ဒါပဲ၊ ဒီလောက်ပဲ။ အမလေးလေး လွယ်လိုက်တာ။ ကဲ ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို ကိုယ်ပြန်
တွက်ကြည့်။ ကိုယ် ဘာနက္ခတ်လဲ ဆိုတာ။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သိရပြီ ဟုတ်။
နတ်နက္ခတ်မွေးဖွားတဲ့ လူတွေဟာတဲ့ နှလုံးသား နူးညံ့ပျောပျောင်းတယ်။ သူတို့က အချော့ကြိုက်တယ်။
အလှအပ အနုအရွလေးတွေကို မြတ်နိုးတတ်တယ်။
ညင်ညင်သာသာ ဆက်ဆံတာကို ကြိုက်တယ်။ သူတို့ကို သွားပြီး ကြမ်းလို့ မရဘူး။
တိုးတိတ်ညင်သာစွာ ဆက်ဆံတာကို လိုချင်တယ်ဆိုတော့ သင် စဉ်းစားရမှာက သင်ဆက်ဆံရမယ့်
နတ်နက္ခတ်ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး သင့်ရဲ့ အသံကို (၃)ပေါက်လောက်အထိ လျှော့ချပစ်
ရမယ်။ လုံးဝ အသံလေးက နူးနူးညံ့ညံ့လေး။ ဟုတ်ပြီနော်။
သင်ပြောတဲ့ စကားသံလေးတွေ စကားလုံးလေးတွေက စပြီး သတိထားရတော့မယ်။
စကားလုံးလေးတွေကလည်း တကယ့်ကို အနုအရွလေးတွေနဲ့ ပြောရမယ်နော်။
အရေးကြီးတာက နတ်နက္ခတ်သမားကို သွားပြီး မအော်မိစေနဲ့နော်။ ဒါ အရေးကြီးဆုံးပဲ။
အဲ လာပြီ လူနက္ခတ်က တကယ့် ဆရာကြီးတွေ။ လူဆိုတော့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ညာဏ် များတယ်ပေါ့။
သူက ဘလိုင်းကြီး လက်မခံဘူး။
အကျိုးအကြောင်း ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ပြောမှ သူကလက်ခံတာ။ အသံအနေအထား ကတော့ပုံမှန်ဆိုရပြီ။
တိုးဖို့လဲ မလိုဘူး။ ကျယ်ဖို့လဲ မလိုဘူး။
အနေအထားကတော့ မတိုးမကျယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတာက ကိုယ် ဆက်ဆံနေရတဲ့ လူက လူနက္ခတ်ဆိုတာကို မမေ့နဲ့။
အဲဒီတော့ ကိုယ်ပြောရမှာက ဘလိုင်းကြီး သွားပြောလို့ သူက လက်မခံဘူး။ အကျိုးအကြောင်း ပြ
ချက်တွေ ခိုင်လုံမှ သူက လက်ခံမှာ။
ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ ...၂၀၁၂-ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာကြီးပျက်မယ်လို့ လုံးဝ သွားမပြောနဲ့။ သူက ခင်ဗျားစကားကို လုံးဝလက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။
အခု အနေအထားက ဘယ်လိုဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် အဲ.. ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရောက်ရင် ကမ္ဘာကြီးက ပျက်မယ်လို့ ပြောကြတယ် ... ဘာညာပေါ့။
အဲဒီလို အကျိုးအကြောင်း ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ သူက နားထောင်လိမ့်မယ်။
ဘီလူးဆိုတဲ့အတိုင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ စရမယ်။ ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား။ ဘီးလူးဆိုင်းတီးပြီး ၀င်
ဘီလူးနက္ခတ်သမားတွေက သူတို့က ပြတ်သားမှကြိုက်တယ်။ သူတို့ကို သွားပြီး ဖွဲ့နွဲ့နေလို့ လုံးဝ
အသံကလည်း ကျယ်မှ ။ စကားကလည်း တိုတိုတောင်းတောင်း ပြတ်ပြတ်သားသားမှ ကြိုက်တာ။
ပျော့စိစိတော့ သွားမလုပ်နဲ့နော်။ သူက ခင်ဗျားကို အခြောက်ထင်သွားလိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့ မိတ်ဆွေတို့ကို ကျွန်တော်က ဒီနည်းလေး ပေးလိုက်တာ။ အရမ်း ကောင်းတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဗေဒင်ပညာကို စသင်တုန်းက ဗေဒင်မသင်ခင်ကတည်းက ဒါကို အရင်စသင်ခဲ့ရတာ။
ကျွန်တော်တို့ဆီကို ဗေဒင်လာတွက်တယ် ဆိုရင် အရင်ဆုံး သူ့ရဲ့ သက္ကရာဇ်ကို နက္ခတ်ကစတွက်ပြီ။
ပြီးရင် ကိုယ့်ဆီကို ဗေဒင်လာမေးတဲ့ သူဟာ ဘာနက္ခတ်လဲ ကျွန်တော်သိလိုက်ရပြီ။ လူနက္ခတ်လား။ ဘီလူးလား၊ လူလားပေါ့။
အိုကေ ကျွန်တော်နက္ခတ်သိတာနဲ့ ကျွန်တော် သူ့ကို သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တယ်။ နတ်နက္ခတ်
ဆိုရင် ကျွန်တော်အသံက တကယ့် တိုးတိုး ညင်ညင်သာသာလေးပါ။
ကျွန်တော်အသံကို မကြားရမှာ စိုးလို့တောင် ကျွန်တော် ခါးကို အသာလေး ရှေ့ကို ကိုင်းလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်တော် သူ့ကို အေးအေးဆေး ဆေးလေး ဗေဒင်ဟောပေးတယ်။
လူနက္ခတ်ဆိုရင် ကျွန်တော် သူ့ကို အကျိုးအကြောင်း ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ဟောရတယ်။ တစ်ခါတလေ
ကျွန်တော် သူ့ကို သူ လုံးဝ နားမလည်နိုင်တဲ့ စာအုပ်ကြီးတွေတောင် ထုပ်ပြလိုက် သေးတာ။ ဟဲဟဲ
လူကိုးဗျ။ သဘောတွေ ကျလို့။
ဘီလူးနက္ခတ်လာလို့ကတော့ အရင်ဆုံး ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ဘီလူး သံပရာသီးကိုက်ထားတဲ့ ရုပ်မျိုး လုပ်လိုက်ရတယ်။
ပြီးတော့မှ အသံကြယ်ကြယ်နဲ့ သူ့ကို ဟောကိန်းတွေ ထုပ်ရတာ။ အာမခံချက်တွေ ရဲရဲပေးပြီး ဟော
အဲဒီလိုမှ သူက တောက်... ဒီလို ဗေဒင်ဆရာမျိုး လိုက်ရှာနေတာဆိုပြီး သဘောတွေ အကျကြီး ကျ
တာကိုးဗျ။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ ဗေဒင်ဆရာတွေ ပြောတာပါ။
ကျန်တာတွေကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆက်ပြီး ပွားယူပေတော့ဗျာ။ အချစ်ရေးလား၊ အိမ်ထောင်ရေး
လား။ လူမှုရေးလား။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း ဆက်ဆံရေးလား၊ အကုန်လုံး အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ပြော တဲ့ နည်းလေးကို မိတ်ဆွေ ဒီနေ့ကစပြီး အသုံးချကြည့်စမ်းပါ။
တကယ် ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လဲ ဒီလောက်ပဲ ပြောတတ်လို့ပါဗျာ။ တကယ်ကောင်းတာပါဗျာ။ တကယ်ပါ။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, March 10, 2013 1 comment:
ကဏ္ဍ ဗဟုသုတများ, ဗေဒင်
ဤလအတွင်း စိန်ထည်ပစ္စည်းများ စက်ပစ္စည်းများ ၀င်လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ရန် အကြံ အစည်
ကောင်းများ အဆက်အဆက်သွက်ကောင်းများ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော် ဤကာလအတွင်းပစ္စည်း
များကို ထုခွဲရောင်းချ၍ လုပ်ငန်းအသစ် ကြီးကြီးမားမား စရန်မကောင်းသေးပါ။ ဤကာလအတွင်း ထီ
မထိုးသင်ပါ။ ထီပေါက်လျှင် မိသားစုအတွင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ညံ့သွားတတ်သည်။
မသွားချင်သော ခရီးများ စိတ်ညစ်စရာခရီးများ သွားရတတ်သည်။ အထက်လူကြီး ဆွေမျိုး အကြီးအ
ကဲတို့က မိမိအပေါ် အထင်လွဲတတ်သည်။ သားသမီးများ ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ ရွှေထွက်မည်။
ခြေ၊ လက်၊ မျက်ခြင်း၊ ခါးနားခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ လုပ်လျှင် အောင်မြင်မည်။
အထူးသတိပြုရန် ငွေလူလိမ်ခံရမည်။ ခင်မင်သူ ချစ်သူကြောင့် ဒုက္ခတွေ့တတ်သည်။
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း များနှင့် မမျှော်လင့်ဘဲ လမ်းခွဲရတတ်သည်။ သားသမီးရှိက အိမ်မှ ထွက်
သွားလိမ့်မည်။ ဒီကာလမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမတွေအထူးသတိပြုပါ။ မွေးလျှင် အခက်အခဲတွေ့
သူ့သဘော သူဆောင် ရလာသောငွေနှင့် လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်အောင် နေပါ။ ဘာမှလုပ်စရာ မရှိ
ပါက ထိုင်နေပါ။ ဥာဏ်ကို ဥာဏ်သုံးလုပ်မှ ဒုက္ခတွေ့တတ်သည်။ အမှု မဖြေရှင်းရပါ။ တတ်နိုင်သ
လောက် အချိန်ဆွဲပါ။ မဖြစ်မနေ ပြဿနာမှုတွေ ရှင်းရမယ်ဆိုလျှင် အရှုံးပေးလိုက်ပါ။
ငွေဝင်လာလျှင် မြေ၀ယ်ထားပါ။ အိမ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဆောက်ပါနှင့် ဤကာအတွင်းကောင်းကျိုး
ချမ်းသားများပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များသက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများ
ကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။ အိမ်ကဘုရားတွင် ကောဖီ (၁)ခွက်နှင့် ကိတ်မုန့်(၁) ချပ် ကပ်လှူလိုက်ပါ။
ယခုကာလတွင် အိမ်ထောင်ပြုပါက တည်မြဲသောအိမ်ထောင်မဖြစ်နိုင်၊ အိမ်ထောင်ပြုလျှင် သားသမီး ပါလာတတ်သည်။ လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ရတတ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည်လည်း လွန်စွာကျိုးပေး
အောင်မြင်မည်။ အလှူအတန်းပြုရခြင်း၊ မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်း များ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။
ဘုရားဆင်းတုတော်၊ ပုံတော်များ ကြွလာမည်။ သင့်အတွက်အလွန်ကောင်းသောနိမိတ် ဖြစ်ပါသည် ဤကာလအတွင်း၌ စီးပွားအလွန်ကောင်းသကဲ့သို့ ကိုယ်ကျင့် တရား အထူးအရေးကြီးသော အချိန်
ဖြစ်ပါသည်။ အမှုအခင်းဖြစ်နေသူကို ငွေမချေးပါနှင့်၊ အာမခံမလိုက်ပါနှင့်၊ သတိပြု၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ပတ္တမြား မြ ထွက်တတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင်အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် အဆင်
မပြေ ကြီးစွာဖြစ်တတ်သည်။ သွပ်၊ သံ၊ သစ်တစ်ပတ်ရစ် ပစ္စည်းလက်မခံပါနှင့်၊ အောက်လက်ငယ်
နာရေးကိစ္စကို အကြောင်းပြ၍ ခရီးသွားရတတ်သည်။ ဆရာသမား ကဲသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဆင်
မပြေ ဖြစ်မည်။ လုပ်ဖော် ကိုင်လက်များ မိတ်ဆွေများနှင့် အဆင်မပြေ လမ်းခွဲ ရတတ်သည်။
ယခုကာလတွင်အိမ်ဆောက်လျှင် မကောင်းပါ အစားမှား ဆေးမှားဖြစ်ခြင်း သွားဒုက္ခပေး ခြင်းများ ကြုံ
ရမည်။ မြေကိစ္စ အမွေနှစ်ကိစ္စ များကြုံရ တတ်သည်။ ငွေရှာရ လွယ်ကူပေမယ့် စုဆောင်း၍ မရ၊။
ငွေဝင်လျှင် ကိုင်မထားရ၊ ရွှေဝယ်ထားပါ။ ဤကာလတွင် ကိုယ်စိတ်နှုတ်သုံးပါးကို မဖောက်မပြန် တည်တည် ကြည်ကြည် ထ်ိန်းသိမ်းနိုင်သူတွေ တန်ဖိုးကြီးမားသော ဘ၀သို့ ရောက်နိုင်သည်။
ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိ လာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ၊ သက်သာပြေ
ပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာ များကို ဂရုစိုက်ပြု လုပ်ပါလေ ။
ယခုလသည် မိဘကို ကောင်းစွာပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မည့်အချိန် ဖြစ်သည်။ စီးပွားသိသိသာသာ တက်မည်။ သိကြားမလိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက် များစွာမြင့်တက်သွားလိမ့်မည်။ လုပ်
ငန်းများ သိသိသာသာ အောင်မြင်မူရမည်။ လုပ်ငန်သစ်များ စတင်ပြု လုပ်နိုင်သော ကာလ၊ လုပ်ငန်းဟောင်းများ ပြန်ပေါ်တတ်သည်။ ဘုရားဖူးခရီးများ စိတ်ချမ်းသာစရာခရီးများ ပြည်တွင်း
ပြည်ပခရီးများ သွားတတ်သည်။ ၀န်ထမ်းဖြစ်လျှင် ရာထူးတက်ခြင်း အခြေအနေ အဆင့်အတန်း
မြင့်တက်ခြင်းများကြုံမည်။ သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်း ပညာကောင်း ရခြင်းများ ကြုံမည်။
မိတ်ဆွေကောင်း ဆရာကောင်များ တွေ့မည်။ အဖိုးတန်စက် ပစ္စည်များဝင်မည်။ မြေကိစ္စ၊ အမွေ
ကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ ငွေရှာရလွယ်ခြင်း ငွေအ၀င်အထွက် ကြမ်းခြင်းများ ကြုံလိမ့်မည်။
ရပ်ဝေးမှစာများ အဆက်အသွယ်များ ရလာမည်။ ရန်များခြင်း စကားများဖြေရှင်းရခြင်း ရင်နှီးသူများ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် အဆင်မပြေ လမ်းခွဲရခြင်းများ ကြုံမည်။ အထူးသတိပြုရန် အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အနည်းငယ်ကြုံရတတ်သည်။ အမှုအခင်း ရုံပြင်ကန္နားနှင့် ပတ်သက်ရတတ်သည်။ စိုး
ရိမ်စရာ မရှိပါ။ အကြီးအကဲ ကောင်းရနိုင်၏။ အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဖက် စိတ်ညစ်ရ
တတ်သည်။ ဆွေမျိုးသားချင်းများ ကျန်းမာရေး အသည်းအသန် ဖြစ်တတ်သည်။
လာမည့် မွေးလ မွေးရက်အထိ အသုဘပို့ခြင်း မပြုပါနှင့် အထူး သတိပြုပါ။ နှလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း။ လေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း ဒူး နား ဒုက္ခပေးခြင်းများ ကြုံရတတ်
သည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ ပေါ်လိမ့်မည်။ လုပ်လျှင်အောင်မြင်မည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်
စေ၊ ၀န်ထမ်းဖြစ်စေ ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်မည့်ကလာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကာလအတွင်းကောင်း
ကျိုး ချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါ ယတြာများ ကို ဂရုစိုက်ပြု လုပ်ပါလေ။
အိမ်သစ်ဆောက်လျှင် ကောင်းအချိန် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအသစ်ပေါ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လက်ရှိအ
လုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်သစ်များ။ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နာ
မည်ကောင်းရခြင်း နေရာကောင်းရခြင်း၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရခြင်းများ လုပ်ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်
မရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျတတ်သော ကာလဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်သည် ယောက်ျားဖြစ်ပါက အိမ်
ထောက်ကျလျှင် ကောင်းပါသည်။ မင်္ဂလာဆောင်လျှင် စည်ကားသော မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မည်။ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ အိမ်သုံးပစ္စည်း ၀င်တတ်သည်။ သူခိုး၊ မျက်စေ့ အကျခံရတတ်သော ကာ
လဖြစ်၍ သူခိုး အခိုးခံ ရတတ်ကြောင်း သတိပြုပါလေ။ ခရီးအကျိုးပေးသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားဖူးခရီး သွားရတတ်သည်။ ကွဲကွာနေသော ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် ပြန်ဆုံမည်။
ရပ်ဝေးမှ ဆွေမျိုးသားချင်းများ ရောက်လာတတ်သည်။ အိမ်သို့ အတောင်ပါသော သတ္တ၀ါများ ၀င်
လာတတ် သည်။ ၀င်လျှင် နိမိတ်ကောင်းသည်။ သွပ် သံ သစ် စသော သောကြာနံပစ္စည်းများ ၀င်လာတတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် မိတ်ဆွေရင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တို့က ဒုက္ခပေးတတ်သည်။
မြေကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ မြေအ ၀င်မခံရပါ။ မြေ၀င်လျှင် ကြာသပတေးနံ
ထုတ်ပစ်ပါ။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သောပစ္စည်း လှူဒါန်းပါ။ ရွှေနှင့် အဖိုးတန် ရတနာပစ္စည်းများ ၀င်လာမည် ဘုရာဆင်းတုတော် စွယ်တော် ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်သည်။ လက်ဝတ်ရ တနာများ ကျောက်ပြုတ်ထွက်ခြင်း ပျောက်ခြင်း၊ ဖြစ်တတ်သည်။ အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အပြိုင်
အဆိုင် ကြီးစွာကြုံ မည်။ အတိုက်အခံမှန်သမျှ အနိုင်ရမည်။ မိသားစု အကြီးအကဲ လုပ်ငန်းအကြီး
အကဲ တို့ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဖခင် ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။
ထီပေါက်သကဲ့သို့ ငွေများဝင်တတ်သည်။ ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာ
စေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက် ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်
အုန်းထမင်း၊ အုန်းနို့နှင့်ချက်ထားသော ဘဲသားဟင်းကို ဘုန်းကြီးလှူပါ၊ တံခွန်းကုက္ကား မလေးပွား ဂြိုလ်တိုင်သက် စေ့လှူပါ
အလှူအတန်းကိစ္စများ မုချလုပ်ရမည်။ ငွေအစုလိုက် အပုံလိုက် ၀င်လာလိမ့်မည်။ မိမိ၏ အလုပ်မှ လည်းကောင်း၊ ထီပေါက်၍လည်းကောင်း ၀င်လာတတ်သည်။ ဤကာလမျိူးး၌ သာမန်အခြေ အ
နေမျိုးမှနေ၍ စီးပွားအရှိန်အဟုန် နှင့်တက်ကာ လက်ရှိအခြေအနေထက် အဆပေါင်းများ စီးပွား တက်လိမ့်မည်။ မိမိလုပ်ငန်းများကို အင်နှင့် အားနှင့် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်သင့်သော်လည်း ဖြတ်လမ်း မ
လိုက်ရန် သတိပေးလိုပါသည်။ မိမိအား ပြဿနာလုပ်နေသူများ ရှိလျှင် အဆင်ပြေသွားမည်။ မသင့်မြတ်သူများနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားမည်။ အဖိုးတန်ကျောက် မျက်ရတနာများ ၀င်မည်။
အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် သောကရောက်ရသော ကာလဖြစ်သည်။ အထက်လူ
ကြီး၊ မိသားစု ကြီးကဲသူများကြောင့် စိတ်ညစ်ရမည်။ အတူနေမိသားစုထဲမှ အကြီးအကဲ အဘိုး အ
ဘွားများအရေးဖြစ်တတ်သည်။ လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများ အကျိုးပေး အောင်
မြင်မည်။ ခရီးများမကြာခဏ ထွက်ရတတ်သည်။ ထိုခရီးများသည်လည်း အကျိုးပေး အောင်မြင်
လိမ့်မည်။ ၀န်ထမ်းဆိုလျှင် ရာထူးတက်ခြင်းအခြေအနေ မြင်တတ်ခြင်း ကြုံရလိမ့်မည်။ ပညာရေး
ကိစ္စများ သင်တန်းကိစ္စများကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်ညစ်ရတတ် သည်။ ရွှေထွက်ခြင်း၊ ရွှေအတွက်
ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ အင်္ဂါနံ စိန်၊ စက်ပစ္စည်း ထွက်တတ်သည်။ ရွှေထည်
၀ယ်လျှင် အသစ်များသာ ၀ယ်သင့်သည် အပျက် အဟောင်း မ၀ယ်သင့်ပါ။
အထူးသတိပြုရန် အောက်လက်ငယ်သားသားသမီး ထွက်သွားခြင်း၊ ၎င်းတို့အတွက် သောကရောက်
ရခြင်းများကြုံရတတ်သည်။ ဆီးရောဂါ၊ မျက်စိရောဂါများ ဒုက္ခပေးခြင်း၊ အစားမှားခြင်း၊ ဆေးမှားခြင်း
များ ကြုံရတတ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းစာချုပ်ကိစ္စများအတွက်စိတ်ညစ်ရခြင်း၊ ပစ်စာတိုင်စာ ရောက်
ခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို ကောင်းစွာ အကူအညီ ပေးနိုင်လိမ့် မည်။
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ကို စိတ်မ၀င်စားခြင်း၊ အလုပ်ပြောင်းလိုစိတ်များ ကြုံလာတတ်သည်။
အိမ်ဝယ်နိုင်သော် လည်း အိမ်အနားအဆာ မလွတ်၊ အိမ်ဧည့်သည်မပြတ်၊ အိမ်ဆောက်လျှင် တန်း
လန်းဖြစ်တတ်သည်။ ခိုင်မာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ထားပါ။ ရရှိသော အကြွေး
များကို ယခုကာလတွင် ကြိုတင်စုဆောင်းထားပါ။ သို့မဟုတ်ပါက ဆုံးတတ်သည်။
ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေ
ပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။
ခရီးတိုခရီးရှည်များ သွားနေရလိမ့်မည်။ ထိုခရီးသည်များသည်လည်း သင့်အတွက် ကျိုးထူး စေပါ
လိမ့်မည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခု သင်ကြားရခြင်း သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်းများ ပြုလုပ်ရ
တတ်ပါသည်။ မရည်ရွယ်ဘဲ မြေ၀င်တတ်သည်။ ဤလအတွင်း အစစအရာရာ သတိကြီးစွာထား
ရန် လိုပါသည်။ မိမိအပေါ် မကောင်းကြံခြင်း မကောင်းပြောခြင်းများ ခံရတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင်
၌ ထိုခိုက်တတ်သည်။ ပြဿနာကြီးစွာ ဖြေရှင်းရတတ်သည်။ ရုံးပြင်ကန္နာ၊ အမှုအခင်းများနှင့် ပတ်
သက်ရ တတ်သည်။ မိမိနှင့်တကွ မိသားစုပါ ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းအထိ
ရောက်ရတတ်သည်။ မီး၊ လျှပ်စစ် ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ အထူးသတိပြုပါ။ လူမျိုးခြား ဒုက္ခပေးတတ်
သားသမီး လက်အောက်ငယ်သား အတွက် စိတ်ညစ်စရာကြုံမည်။ စက်ပစ္စည်း ဒုက္ခပေးတတ် သည်။
ရွှေနှင့် ရတနာပစ္စည်းများ ထွက်ခြင်း၊ ပေါင်နှံရခြင်းများကြုံရတတ်သည်။
ငွေဒလဟောထွက်ခြင်း၊ ငွေအတွက် ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။
မထင်မှတ်သော ဆွေမျိုးသားချင်းကအကူအညီကောင်းပေးလိမ့်မည်။ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲ၊ ဆွေ
မျိုးအကြီးအကဲတို့က အကူအညီအကောင်း ပေးလာလိမ့်မည်။ အထူးသတိပြုရန် ကျန်းမာရေးညံ့သော သက်ကြီးရွယ်အိုများ အိမ်သို့ လာရောက်တည်းခိုလျှင် ဆုံးပါးသွားတတ်သည်။
ခြေထောက် တွင်အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်သည်။ လုပ်ငန်းအသစ်၊ အစီအစဉ်သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာတတ်
သည်။ ယခင်နှစ်များက ကျန်ခဲ့သော ရွှေ၊ငွေ၊ ရတနာများ ယခုနှစ်ထဲတွင် ကုန်ဆုံးသွားတတ်သည်။
လောကဓံတရား၏ မတရားညှဉ်းပမ်းမှုကို ခံရပြီး မမျှော်လင့်ဘဲ သံဝေဂတရား ရလိမ့်မည်။ အစစ်အ
ဆေး အမေးအမြန်း ခံရတတ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဒာ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု ထိခိုက်တတ်သည်။
ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိ လာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေ
ပျာက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြု လုပ်ပါလေ။
ဘုရားဆင်တုတော်၊ ပုံတော်၊ ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်သည်။ မထင်မှတ်သော ခရီးများ မရည်ရွက်သော ခရီးများသွားရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးကိစ္စအတွက် ခရီးသွားရတတ်သည်။ လူမျိုး
ခြားက ကူညီခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ အောင်မြင်ခြင်းများကြုံမည်။
နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်ခြင်း ဘုန်တန်ခိုး တိုးတက်ခြင်းများ ကြုံရမည်။
မနာလိုသူလည်း ပေါ်လိမ့်မည်။ မိမိထက်မြင့်သူနိမ့်သူ နှစ်ဦးလုံးက ဒုက္ခပေးလာတတ် သောအချိန်
ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ အောင်မြင်တော့မလိုလိုနှင့် အခက် အခဲကြီးစွာ ကြုံတတ်သည်။
အလုပ်တွင် အပျက်စီးအဆုံးရှုံး အလေအလွင့် များနေလိမ့်မည်။ ငွေပျောက်ခြင်း ကြွေးတင်ခြင်း ငွေ
အတွက် ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ ကြီးကဲသူ အထက်လူကြီးများကြောင့် စိတ်ညစ်
ရတတ်သည်။ အလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲအစီစဉ်များအထစ်အငေါ့ကြုံခြင်းရက်ရွှေ့ခြင်းများကြုံရတတ်သည်။
လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြောင်းချင်စိတ်ပေါ်လာမည်။ ပြောင်းလျှင် ပိုဆိုးသွားတတ်သည်။ အထူးသတိ
ပြုရန်။ အစာအဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခြေထောက် ခါး၊ သွားဒုက္ခပေးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ဤလအတွင်း အမှုအခင်း မဖြစ်စေရန် အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ဖြစ်လျှင် မပြီးနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတတ် သည်။ ငွေနှင့်လိုက်လျှင် ရှုံးသွားတတ်ပါသည်။ ပစ္စည်း မဌားရမ်းပါနှင့် ဆုံးလိမ့်မည်။ ဤကာလအတွင်း မည်သည့်အခက်အခဲ
နှင့် ကြုံသည် ဖြစ်စေ အားကိုး မရှာနှင့်။ ဒုက္ခပေးမည့်သူများသာ ပေါ်လာတတ်သည်။ အောက်လက်
ငယ်သား ထွက်သွားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း ကြုံရ တတ်သည်။ ထီကံကောင်းသော ကာလဖြစ်ပါ
သည်။ ပညာအသစ်တစ်ခု ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေး ညံ့လိမ့်မည်။ ခါး အောက်
ပိုင်း ဒုက္ခပေးတတ် သည်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့သွားရတတ်သည်။
ကျောဒုက္ခပေးခြင်း၊ ကျော၌ရောဂါရခြင်း ဖြစ်မည်။ အိမ်ပြင်၊ အိမ် ဆောင်၊ အိမ်ပြောင်း မပြုပါနှင့်။ အာမခံမလုပ်ပါနှင့်။ စပ်တူအရောင်းဝယ် အကြီးအကျယ် မလုပ်ပါနှင့်။ ဤကာလအတွင်းကောင်း
ကျိုးချမ်း သာများ ပိုမိုရရှိ လာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေ ပျောက်စေရန် အောက်ပါ
ယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြု လုပ်လေ။
နေ့စဉ်ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းရေး၊ အိမ်သန့် ရှင်းရေး လုပ်ပါ။ သောက်ရေအိုး ကိုယ်တိုင် ရေထည့်ပါ။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ပါ။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Wednesday, March 06, 2013 No comments:
လက်ဖ၀ါးပေါ်က - ကျွန်း
(၁၆)နေရာ- အသက်ကြီးမှ အလုပ်အကိုင်မရှိ၊ဒုက္ခတွေ့တတ်။
(၁၇)နေရာ-ကျောင်းကြို ကျောင်းကြား ဇရပ်ကြို ဇရပ်ကြားမှာ ဘ၀ဆုံး။
(၁၈)နေရာ-အလုပ် ခဏ ခဏပြောင်း၍ ဒုက္ခရောက်။ မှိုင်တွေ နေတတ်တယ်။
(၁၉)နေရာ- ဟန်ရေးပြပြီး ထွက်ပြေးတတ်တယ်။
(၂၁)နေရာ- အလွန်အမင်း အားငယ်တတ်တယ်။
(၂၂)နေရာ- အပျို ဖြစ်စမှာပင် အပျိုရည်ပျက်။ ပန်းကောင်း အညွန့်ကြိုး။
(၂၃)နေရာ- ညာဏ်ထိုင်းတယ်။ သတိမေ့တတ်တယ်။
လက်ဖ၀ါးပေါ်က - ဇကာကွက်
(၁၅)နေရာ-တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်။ လောဘကြီးတယ်။ နာမည် ပျက်တတ်တယ်။
(၁၆)နေရာ- ကံဆိုး မိုးမောင် အိုကြီး အိုမရောက်မှ ထောင်ကျ။
(၁၇)နေရာ-ပေါက်ပေါက် ရှာရှာပြော၊ ပုံကြီး ချဲပြောတတ်တယ်။
(၁၈)နေရာ-သီလ သမာဓိ မရှိဘူး။ ခိုး ၀ှက်တတ်တယ်။
(၁၉)နေရာ- အလွန် ကြောက်တတ်တယ်။
(၂၁)နေရာ- အကုသိုလ် အလုပ်မှာ အကျိုးပေးတယ်။ ညာဏ်ကောင်း ၊ လူသတ်သမား ၊ သွေးကြောပြတ်သေ။
(၂၂)နေရာ- သားပျို သမီးပျိုကို ဖျက်စီးတတ်သူ ၊ ဒု သ န သော
(၂၃)နေရာ- စိတ် မငြိမ် ၊ ဆီးချို ၊ ဗိုက်ရောဂါ ရ၊ အလို မပြည့်။
လက်ဖ၀ါးပေါ်က - တြိဂံ
(၁၅)နေရာ-အကြီးအကဲ ဖြစ်မယ်။ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်မယ်။
(၁၆)နေရာ- တရားထူးရမယ်။ လောကီပညာနှင့် ၀ါသနာပါသူ ၊ မှော်မျက်လှည့် ၀ါသနာပါသူ။
(၁၇)နေရာ-မုချ စီပွားရေး၌ အထူး အောင်မြင်မည်။
(၁၈)နေရာ-စိတ်တန်ခိုးရှင် - သူတစ်ပါးကို အမိန့်ပေးနိုင်သူ။
(၁၉)နေရာ- အပြိုင်အဆိုင်တွေမှာ အောင်မြင်မယ်။ မျက်စိ လျှင်တယ်။
(၂၁)နေရာ- ဖြတ်ထိုးညာဏ်ကောင်းတယ်။ ခံနိုင်ရည် အတော် ရှိတယ်။
(၂၂)နေရာ- အချစ်၏ ဒဏ်ချက် အပြုံး မပျက် ခံရသူပါ။
(၂၃)နေရာ- ညာဏ်ကြီးရှင်- မာစတာ ဘရိန်း။
လက်ဖ၀ါးပေါ်က - ကြယ်
(၁၅)နေရာ- ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာရ။ အဆင့်မြင့်စွာနေရ။
(၁၆)နေရာ- ရာထူးကြီးပြီး အသေဆိုးနှင့်သေ။ လေဖြတ်၊ သားသမီးမြုံ။
(၁၇)နေရာ-လူအများ၏ လေးစား ကြည်ညိုခံရတယ်။ သန်းကြွယ်သူဋ္ဌေး။ ထီပေါက်။
(၁၈)နေရာ- ကုန်သည်။ လူလိမ်၊ ပေါက်ကွဲသေဆုံး ၊ သူခိုး
(၁၉)နေရာ- လူစွန့်စား ၊ ဥပစ္စေဒကကံ။
(၂၁)နေရာ- မနာလိုစိတ်ကြီးမား ၊ သတ္တိရှိက ချမ်းသာ။
(၂၂)နေရာ- မျက်နှာပွင့် ၊ စန်းပွင့်။
(၂၃)နေရာ- အနုပညာ ထွန်းပေါက် ၊ ဦးနှောက် ထိခိုက်။
(၁၅)နေရာ- စီးပွားပျက်- နာမည်ပျက်တတ်တယ်။
(၁၆)နေရာ- သူတစ်ပါး နှောက်ယှက် ဖျက်ဆီး ခံရတယ်။
(၁၈)နေရာ- အပေါင်းအသင်း မရှိ။
(၁၉)နေရာ- ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတတ်တယ်။
(၂၁)နေရာ- ဘာပဲ ပြိုင်ပြိုင် ရှုံးတတ်တယ်။
(၂၂)နေရာ- အချစ်ဝေဒနာ ကာလသား ရောဂါ ဖြစ်မယ်။
(၂၃)နေရာ- စုန်းပူးသလိုလို နတ်ပူးသလိုလို ရူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်မယ်။
ဒီလို လက္ခဏာ လမ်းကြောင်းမျိုးက တော်တော်လေး ရှားပါတယ်။ ရှိတော့ ရှိတယ်။ ရှားတယ်။ နှလုံး လမ်းကြောင်းမှာ စက်ဝိုင်းပုံလေး ခံနေတဲ့ လမ်းကြောင်းပါ။ အဲဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေဟာ လူသားစင်စစ်မဟုတ်တဲ့ ၀ိဥာဉ်လောကနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ချစ်ကြိုး သွယ်တတ်ပါတယ်။ ဥစ္စာစောင့်မလေးတွေ ၊ ဥစ္စာစောင် အမျိုးသားတွေနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာပိုင်ရှင်ပါ။ (ဒီအကြောင်းကို နောက်မှ ဂမ္ဘီရ ဆန်းကျယ် ၀တ္ထု ရေးပါဦးမယ်)
နှလုံးလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်မှာ ကျွန်းတွေအများကြီး ပါနေရင်တော့ အချစ်ရေး ကိစ္စတွေမှာ မလေးနက်ဘူး၊ အလေးမထားဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူအပေါ် ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမျိုး ထားတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေဟာ ချစ်သူများတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက် ပိတောက်ဆို ပိတောက် မရှိတတ်ဘူး။ အဆင်ပြေတဲ့ လူနဲ့ ချစ်သူ ဖြစ်လိုက်ကြ တာပါပဲ။
နှလုံးလမ်းကြောင်း နှစ်ထပ်ပါနေရင်တော့ အချစ်ကြီးသလိုအမျက်လည်း ကြီးတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အချစ်ရေးကို ဦးစားပေးလွန်းတယ်။ အချစ်ရေးကို ရှေ့တန်းတင်လွန်းပါတယ်။ အချစ်သည်သာပဓာနဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေပေါ့။ သူတို့ဟာ အချစ်ကို ဦးစား ပေးသလို ချစ်သူ ကိုလည်း အလွန်အမင်း သ၀န်ကြောင် တတ်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်ခုံ အောက်တည့်တည့် နှလုံး လမ်းကြောင်း ပေါ်မှာ အပြတ်တစ်ခု ရှိနေရင်တော့ အချစ်ရေးမှာ တစ်ဖက်စောင်းနင်း
နိုင်တတ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့အချစ်သည်သာတန်ဖိုးရှိတယ်။ မြင့်မြတ်တယ်၊ မိမိသည်သာ ချစ်သူအပေါ်ကို အရမ်းချစ်မြတ်နိုး နိုင်တယ်။ မိမိအချစ် သည်သာ ဖြူစင်တယ်လို့ မိမိကို မိမိ ခံယူ နေသူရဲ့ လက်ဝါး ပြင်နှလုံး လမ်းကြောင်းမှာ ပါတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ဟာ ချစ်သူ အပေါ်မှာ အင်မတန် လွှမ်းမိုးအနိုင်ယူချင်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ချစ်သူဟာ သူတို့ကို အမြဲတမ်း ဦးစား ပေးနိုင်မှ သဘော ကျပါတယ်။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, March 03, 2013 No comments:
ပထမဦးစွာ သင့်မျက်နှာပေါ်ရှိမှဲ့ကို အရင် ဆန်းစစ်ပါ။ ပြီးရင် သင့်မျက်နှာပေါ်ရှိ မှဲ့နေရာကို ပုံပါအတိုင်း အနီးစပ်ဆုံးနံပါတ်ကိုကြည့်ပြီး အမျိုးအစားပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပါ။ ထင်ရှားပြတ်သားပြီး တခုတည်းရှိသော
မှဲ့ကိုသာ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရပါမယ်။ မျက်နှာပေါ်မှ အစက်အပြောက်များ၊ ဝက်ခြံ (သို့) မှဲ့သေးသေး
ကလေးများကို ထည့်မတွက်ရပါဘူး။ ကဲ- မှဲ့နေရာက သက်ဆိုင်... ရာအနေအထားမှာရှိတာသေချာရင်
ဘယ်နံပါတ်ထဲ ပါဝင်နေမလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်။
နံပါတ် ၁ မှ ၃
ကလေးတယောက်လိုပဲ သင့်ရဲ့စိတ်ဟာ တခါတရံမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲ ပေါက်ကွဲလွယ်တယ်။ မွေးရာပါ တီ
ထွင်ကြံဆဥာဏ်ရှိပြီး လွတ်လပ်ခွင့်ပြုထားပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် သင့်ရဲ့အထက်အရာရှိက သင့်ရဲ့တွေးခေါ်ဆန်းသစ်လုပ်ဆောင်ရည်ကို နှစ်သက်သဘောကျမှာဖြစ်ပါ
တယ်။ အဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့မှဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ သူများအလုပ်ကို လုပ်ရတာထက် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ကံ
ပါပြီး စီးပွားရေးမှာလည်း အောင်မြင်ထွန်းပေါက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ စိတ်ကူးရသလို လုပ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို သူတပါးအပေါ်ကို လွှမ်းမိုး
သွားအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးမျိုး ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။
ထင်မြင်ယူဆဝေဖန်မှုများအပေါ် အငြင်းအခုံသန်သူဖြစ်ပြီး မကျေနပ်ချက်နဲ့ အလိုမကျမှုများကို စိတ်
ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပြောတတ်သူဖြစ်လို့ အများနှင့်ဆက်ဆံရာမှာ အခက်အခဲတွေ့တတ်ပါတယ်။
အဆိုပါမှဲ့ပိုင်ရှင်မှာ အငြိုးဒေါသ ပေါက်ကွဲလွယ်သူဖြစ်လို့ အဲဒီအကျင့်လေးသာ ဖျောက်အောင်လုပ်နိုင်
မယ်ဆိုရင် လူ့လောကမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ နေထိုင်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ခုံးအပေါ်ထက်ရှိ မှဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ နေရမယ့်ကံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများ
ထက်တော့ပိုရှာပြီး ပိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ သင်ရှာသမျှငွေတွေကို သေချာထိန်းသိမ်းရပါလိမ့်မယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ကိုမနာလိုသူတွေက စကားချိုချိုနဲ့ သင့်ရဲ့ဥစ္စာဓနကို ခွဲဝေယူဖို့ ကြံစည်ကြပါ
လိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ အလျင်အမြန်ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့စီမံကိန်းကြီးထဲကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကြိုးစားလာသူများ
ကို အထူးသတိရှိပါ၊ သူတပါးအား အယုံမလွယ်မိဖို့ သတိပေးပါရစေ။ သင့်ရဲ့ပင်ကိုဥာဏ်ကိုသုံးပြီး သ
တိဝိရိယနဲ့နေပါ။ ဘယ်သောအခါမှ သင့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စရပ်များကို တပါးသူအား မချုပ်ကိုင်ပါစေနဲ့။
ဒီနေရာမှာရှိတဲ့မှဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ ဥာဏ်ကောင်းတယ်၊ တီထွင်ဖန်တီးဥာဏ်ရှိတယ်၊ အနုပညာစွမ်းရည်ရှိ
တယ်။ အဆိုပါစွမ်းရည်က သင့်ကို ချမ်းသာကျော်ကြားပြီး အောင်မြင်စေတယ်။ ချမ်းသာမဲ့ ကံပါလာ
ပြီးသား။ ဒါပေမဲ့ သမားရိုးကျစီးပွားရှာဖို့လမ်းစဉ်ထက် ကိုယ်စိတ်နှလုံးသွင်းပြီး ရဲရင့်သတ္တိရှိမှ အောင်
မြင်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
မျက်ခုံးအောက်မှာရှိတဲ့ မှဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ ပူဆွေးသောက စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဆွေမျိုး၊ မိသားစု
အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာကတောက်ကဆ စကားများတတ်တယ်။ အဲဒါကသင့်အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်း
ကျောင်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆွေမျိုးအ
သိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ညှိယူပါ။
ဒီနေရာမှာမှဲ့ရှိရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ အသုံးအဖြုန်းများတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အမြဲအလိုလို ငွေ
ကြပ်နေတတ်တယ်။ လောင်းကစားကို ခုံမင်သူလည်း ဖြစ်တယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ရပ်တန်းက ရပ်ရမ
လဲဆိုတာ မိမိကိုယ်ကိုသိပါ။ အလားတူ အဲဒီမှာမှဲ့ရှိတဲ့သူဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုသာမက လိင်တူ
ကိုပါ ဆွဲဆောင်ကလူတတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကို အသုံးချရာမှာ အနည်းငယ် မြော်မြင်ဆင်
ခြင်နိုင်မှ တော်ခါကြပါမယ်။ မဟုတ်ရင် ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။
ဒီနေရာရှိ မှဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ အခြားပြဿနာများ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကံမကောင်းတဲ့မှဲ့ဖြစ်လို့ ဖြတ်ပစ်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ ပူဆွေးသောကများစွာနဲ့ ပြဿနာပေါင်းများစွာကို ယူဆောင်လာမဲ့ မှဲ့မျိုးပါ။
နှာခေါင်းအောက်တည့်တည့်မှာမှဲ့ပါရင် သားမြေးစဉ်ဆက်ထိ ကံကောင်းတယ်။ အချိန်ပြည့် မိသားစု
ဝင်များနဲ့ သားသမီးများ၊ မြေးများနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနေရမယ်။ သင်နဲ့အနီးဆုံးလူရဲ့ အထောက်
အပံ့ကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သင့်အား ဥစ္စာပစ္စည်းရော၊ စိတ်ခံစားမှုရော အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ
ဒီနေရာမှဲ့ရှိတဲ့သူဟာ နာဖျားခြင်းကို မလွန်ဆန်နိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့် အဲဒီမှဲ့ကြီးပြီး မည်းလာရင်ဖျက်ပစ်
လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဒါမှမဟုတ် အောက်ခံမိတ်ကပ်ဖောင်ဒေးရှင်းများများသုံးပြီး ဖုံးထားပါ။
ဒီနေရာမှဲ့ရှိတဲ့သူဟာ အောင်မြင်ရုံသာမက တည်ငြိမ်မျှတတဲ့ဘဝကို ရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်မချမ်းသာရင်တောင်မှ ကျော်ကြားမယ်။ သင့်ကို မြင့်မားတဲ့ဘဝမှာ နေထိုင်ပိုင်ဆိုင်ဖို့အခွင့်အ
ရေးပေးသော်လည်းပဲ သင်ဟာ သင့်အိမ်နဲ့မိသားစုဘဝမှာပဲ ကျေနပ်တင်းတိမ်နေမယ်။ အဲဒီနေရာ
မှာမှဲ့ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးများဟာ အထူးသဖြင့် ကံကောင်းမယ်၊ လှပမက်မောစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပါလိမ့်
သင့်ကလေးတွေက သင့်ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ပူပန်သောက စိုးရိမ်မှု တခုပါပဲ။ သူတို့လေးတွေနဲ့ ဆက်ဆံ
ရတာ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သည်းခံနိုင်အောင် ကျင့်ကြံဖို့ ကြိုးစားရုံမှတပါး ဘာ
ဒီနေရာမှာမှဲ့ရှိတဲ့သူဟာ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတခုပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်ဟာတချို့အစားအစာနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်အစား
သင်ဟာ သွက်လက်တက်ကြွတယ်၊ သင့်အိမ်ကိုအမြဲလိုလို ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးအလှဆင်ရတာကို နှစ်သက်
သူဖြစ်တယ်။ ပစ္စည်းသစ်ကို သုံးရတာ၊ နေရာအသစ်အဆန်းကို သွားရတာ သဘောကျတယ်။
တနေရာထဲမှာ ကြာကြာနေရတာကို မနှစ်မြို့ပေ။ ခရီးသွားခြင်း၊ စွန့်စားခြင်းကို နှစ်သက်ပြီး ဂရုတ
သင်အစားစားတော့မယ်၊ လိင်ဆက်ဆံတော့မယ်ဆိုရင် သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ၂ခုဟာ သင့်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပေတယ်။ သင့်ကိုစိတ်ဓါတ်ကျစေမဲ့ ပူပန်သောကတွေ ရှိ
လာတတ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ချစ်ရေးချစ်ရာမှာ စိတ်ပါဝင်စားပြီး ချစ်သူကို တယောက်မက ထားတတ်
ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာကိုယ်ကျင့်သိက္ခာစောင့်ထိန်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါကိုအပြစ်ကျူး
လွန်မိတယ်လို့ ယူဆကာ စိတ်ဖိစီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ လူမှုရေးရာမှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမယ်။ သင်ဟာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းသလို စ
ကားပြောကောင်းသူတယောက်လဲ ဖြစ်တယ်။ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကြီးဝင်နေ
တတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကျော်စောမှုကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားမှုဟာ သင့်ကို အလွန်အမင်းထိ
သင်ဟာ အမြဲတမ်းခရီးထွက်နေရမဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ သင့်ဘဝမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးဝေး အများကြီးသွား
ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေလမ်းခရီးသွားရမဲ့အခါတိုင်း အထူးသတိရှိပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဆိုပါ မှဲ့မျိုးဟာ အိမ်မှာနေရတာက သင့်အတွက် ပိုပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်။
သင့်မှာ ငွေရမဲ့ကံရှိပြီး မိတ်ဆွေကောင်းလည်း ပေါများပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီမှဲ့မျိုးရှိတာ ကောင်းပါတယ်။ အားနည်းချက်က ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုနောက်သို့ အလွယ်တကူပါသွားတတ်ကြတယ်။ သင့်ဘဝမှာအဲဒါကသင့်ကို ဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပါ။
ဒီနေရာရှိ မှဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ ကံအရမ်းကောင်းချင်ကောင်းမယ်။ ကံအရမ်းဆိုးရင်ဆိုးမယ်။ ကံတရားက သင့်
ကို အလွန်အမင်းကျော်ကြားမယ် ဒါမှမဟုတ်ရင် မကောင်းသတင်းဖြင့် ကျော်ကြားမယ်လို့ ကြိုတင်စီရင်
သင့်မှာ တီထွင်ဖန်တီးတတ်တဲ့ ပါရမီရှိသလို ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်ရဲ့
ပင်ကိုအရည်အသွေးကို ကောင်းတဲ့နေရာရော ဆိုးတဲ့နေရာမှာပါ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ သင်ဟာ လူ
တွေကို မထီမဲ့မြင်၊ မလေးမစားဆက်ဆံတတ်တဲ့ လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
သင်ဟာ သဘောလွယ်သူမဟုတ်တဲ့အတွက် အလွယ်တကူ ခွင့်မလွှတ်တတ်သလို မေ့လဲမမေ့တတ်ပါ။ ဒီမှဲ့ဟာ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သူ (သို့မဟုတ်) နိုင်လိုမင်းထက်ပြုမူသူအဖြစ် မှတ်ယူရမဲ့ အမှတ်အသား
ဒီမှဲ့မျိုးက ကောင်းပါတယ်။ ဘဝတလျှောက် များများစားရ ၊သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျော်
ကြားမှုနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရမှုများကို ယူဆောင်လာမဲ့ မှဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မှာ ဥာဏ်ရည် (IQ) အရမ်းပဲမြင့်မားပါတယ်။ ဥာဏ်ရည်ပါးနပ်သလို မြို့ရည်လည်ပြီး လူအမျိုးမျိုး
နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။ လူ့ဘဝမှာ ဘယ်လို ရှင်သန်ရပ်တည်ရမလဲဆိုတဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ ပင်ကိုဥာဏ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ၊ သက်တမ်းရှည်တဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အိုမင်းလာသည့်တိုင်အောင် တက်ကြွဖျတ်လတ်နေတုန်းပါပဲ။ ဘဝဆုံးတဲ့အထိ မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနေသွားရမှာပါ။
သင်ဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ကျော်ကြားမှုနဲ့ အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိုမင်းတဲ့အခါ အထောက်အပံ့ပြုဖို့ ငယ်စဉ်ခါ ရလာမဲ့အခွင့်အရေးကို အသုံးချတတ်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဆိုပါမှဲ့ပိုင်ရှင်များဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ဘဝဟာ ခက်ခဲကြမ်း
သင်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုက ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ရရှိပြီး အခွင့်အလမ်း
များစွာခံစားရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လွန်ကဲမှုကို အထူးသတိပြုပါ။
သမရိုးကျအတိုင်း ပြုမူနေထိုင်ပါ။ အသက်ရှည်ပြီး အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမဲ့ဘဝမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာ
မူရင်းစာမျက်နှားfacebook.com/photo.php?
မျှဝေသူ Unknown မှာ Saturday, March 02, 2013 No comments:
ကျွန်တော့်ဆီ စာရေးသားပြီး အကူအညီတောင်းကြသူ များစွာရှိပါတယ်။
အဲဒီ စာရေးသား ပေးပို့သူများစွာဟာ နိုင်ငံတကာက မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
များသောအားဖြင့် သူတို့တွေဟာ သူတို့တတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို လျှို့
၀ှက်ထားစေချင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကလည်း အထူးပဲ လျှို့ဝှက်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက်တော့ စိတ်ထဲမှာ
ကျွန်တော့်ဆီကို စာရေးသားပေးပို့ပြီး အကူအညီတောင်းကြတဲ့ သူတွေထဲမှာ လူမျိုးစုံ အလွှာမျိုးစုံ နယ်ပယ်မျိုးစုံက သူတွေ ပါဝင်ကြပါတယ်။
အင်တာနက်မှာကလည်း အီးမေးလ် အကောင့်တွေ မျိုးစုံနဲ့ အမည် အမျိုးမျိုးနဲ့ ရေးသား ပေးပို့လာ
အီးမေးလ် အကောင့်တစ်ခုကို မြင်တာနဲ့ ဒီသူဟာ ဘယ်သူဆိုတာ သိတာမှ မဟုတ်တာ။
အစတုန်းကတော့ မသိပါဘူး။ နောက်ဆုံး ယတြာချေဖို့အတွက် ဓာတ်ပုံတွေ ပေးပို့လာဖို့ တောင်း
ဆိုလာမှ အံသြ၀မ်းသာစရာ ကောင်းတာက နယ်ပယ်အသီးသီးက နာမည်ကျော်တွေ ဖြစ်နေကြတယ်။
သူတို့တွေကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး လျှို့ဝှက်ထားပေးဖို့ ထပ်ခါထပ်ခါ တောင်းဆိုလာကြတယ်။
ကျွန်တော်ကလည်း ဒီကိစ္စကို ကျွန်တော့်ရဲ့ သေရေးရှင်ရေး ကိစ္စပမာ သဘောထားပြီး လျှို့ဝှက်ပေး
အခု ကျွန်တော်ပြောချင်တာက မြန်မာပြည်မှ စာရေးသား ပေးပို့လာသူများကို ပြောချင်ပါတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့တွေက ယတြာလုပ်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ လွယ်ကူပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘာကိစ္စလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီဆိုက်ထဲမှာ ညွန်ပြထားတဲ့ သက်ဆိုင်ရာယတြာတွေကို လုပ်စေ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဆိုက်ထဲမှာ တင်ပြပေးထားတဲ့ ယတြာတွေဟာဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ဗေဒင်
ဟောခန်းထဲမှာ လာရောက်ပြီး အကူအညီတောင်းကြတဲ့ သူတွေကို လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ယတြာတွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်က မိတ်ဆွေများ အနေနဲ့ကတော့ ယတြာချေရတာ အဆင်ပြေကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီဆိုက်ထဲမှာ တင်ထားတဲ့ ယတြာတွေကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ ဆောင်ရွက်ပါလို့ ပြောချင်ပါ
အခုတလော မြန်မာပြည်ဘက်က ပေးပို့လာတဲ့ စာတွေ အများစုထဲမှာ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေတဲ့ သူတွေ အတော်များပါတယ်။
ဒါကြောင့် လုပ်ရကိုင်ရတာ လွယ်ကူတဲ့ ယတြာနည်းကို ပြန်လည် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေသူများ အောက်ဖော်ပြပါယတြာကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ပါ။
အတာအိုးကလေး နှစ်လုံးကို တစ်လုံးတွင် ရွှေရောင် သုတ်ရ၏။
နောက်တစ်လုံး ကို ငွေရောင် သုတ်ရ၏။
ရွှေရောင် အိုးလေးတွင် ယောက်ျားလေး၏ ဓာတ်ပုံကို ကပ်ရ၏။
ငွေရောင် အိုးကလေးတွင်မူ မိန်းကလေး၏ ဓာတ်ပုံကို ကပ်ရ၏။
ထို့နောက် ယောက်ျားလေး၏ ရွှေရောင်အိုးလေးထဲတွင် သူ၏ မွေးနံပန်းများကို ဂြိုဟ်သက်အ လိုက်ထည့်ရ၏။
မိန်းကလေး၏ ငွေရောင်အိုးကလေးထဲတွင်လည်း မိန်းကလေး၏ မွေးနံပန်းများကို ထည့်ရ၏။
မွေးနံပန်းများကို သိစေချင်သောကြောင့် အောက်တွင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ၏။
ပြီးရင် အဲဒီအိုးနှစ်လုံးကို စားပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာ အိုးချင်းထိအောင်တင်ထားလိုက်ပါ။
အိုးချင်းထားတော့ အိုးချင်းထိ ကြိုးချင်းထားတော့ ကြိုးချင်း ငြိပေါ့။
အခုတလော အီးမေးလ်များကို အကြွေးမတင်အောင် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးလိုက်ဦးမယ်ဗျာ။
from The Irrawaddy's Blog by zarny win
မျှဝေသူ Unknown မှာ Thursday, February 28, 2013 No comments:
၂၀၁၃-ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
ခရီးတိုခရီးရှည်များ သွားနေရလိမ့်မည်။ ထိုခရီးသည်များသည်လည်း သင့်အတွက် ကျိုးထူး စေပါလိမ့်မည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခု သင်ကြားရခြင်း သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်ပါသည်။ မရည်ရွယ်ဘဲ မြေ၀င်တတ်သည်။ ဤလအတွင်း အစစအရာရာ သတိကြီးစွာထား ရန် လိုပါသည်။ မိမိအပေါ် မကောင်းကြံခြင်း မကောင်းပြောခြင်းများ ခံရတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင်၌ ထိုခိုက်တတ်သည်။ ပြဿနာကြီးစွာ ဖြေရှင်းရတတ်သည်။ ရုံးပြင်ကန္နာ၊ အမှုအခင်းများနှင့် ပတ်သက်ရ တတ်သည်။ မိမိနှင့်တကွ မိသားစုပါ ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းအထိ ရောက်ရတတ်သည်။ မီး၊ လျှပ်စစ် ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ အထူးသတိပြုပါ။ လူမျိုးခြား ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ သားသမီး လက်အောက်ငယ်သား အတွက် စိတ်ညစ်စရာကြုံမည်။ စက်ပစ္စည်း ဒုက္ခပေးတတ် သည်။ ရွှေနှင့် ရတနာပစ္စည်းများ ထွက်ခြင်း၊ ပေါင်နှံရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ ငွေဒလဟောထွက်ခြင်း၊ ငွေအတွက် ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ မထင်မှတ်သော ဆွေမျိုးသားချင်းက အကူအညီကောင်း ပေးလိမ့်မည်။ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ၊ ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတို့က အကူအညီအကောင်း ပေးလာလိမ့်မည်။ အထူးသတိပြုရန် ကျန်းမာရေးညံ့သော သက်ကြီးရွယ်အိုများ အိမ်သို့ လာရောက်တည်းခိုလျှင် ဆုံးပါးသွားတတ်သည်။ ခြေထောက် တွင်အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်သည်။ လုပ်ငန်းအသစ်၊ အစီအစဉ်သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။ ယခင်နှစ်များက ကျန်ခဲ့သော ရွှေ၊ငွေ၊ ရတနာများ ယခုနှစ်ထဲတွင် ကုန်ဆုံးသွားတတ်သည်။ လောကဓံတရား၏ မတရားညှဉ်းပမ်းမှုကို ခံရပြီး မမျှော်လင့်ဘဲ သံဝေဂတရား ရလိမ့်မည်။ အစစ်အဆေး အမေးအမြန်း ခံရတတ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဒာ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု ထိခိုက်တတ်သည်။ ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိ လာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြု လုပ်ပါလေ။ ထီးနီသက်စေ့လှူပါ။ ဆေးဝါးဓာတ်စာလှူပါ။
ဤလအတွင်း စိန်ထည်ပစ္စည်းများ စက်ပစ္စည်းများ ၀င်လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ရန် အကြံ အစည်ကောင်းများ အဆက် အဆက်သွက်ကောင်းများ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော် ဤကာလအတွင်း ပစ္စည်များကို ထုခွဲရောင်းချ၍ လုပ်ငန်းအသစ် ကြီးကြီးမားမား စရန် မကောင်းသေးပါ။ ဤကာလအတွင်း ထီမထိုးသင်ပါ။ ထီပေါက်လျှင် မိသားစုအတွင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ညံ့သွားတတ်သည်။ မသွားချင်သော ခရီးများ စိတ်ညစ်စရာခရီးများ သွားရတတ်သည်။ အထက်လူကြီး ဆွေမျိုး အကြီးအကဲတို့က မိမိအပေါ် အထင်လွဲတတ်သည်။ သားသမီးများ ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ ရွှေထွက်မည်။ ခြေ၊ လက်၊ မျက်ခြင်း၊ ခါးနားခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ လုပ်လျှင် အောင်မြင်မည်။ အထူးသတိပြုရန် ငွေလူလိမ်ခံရမည်။ ခင်မင်သူ ချစ်သူကြောင့် ဒုက္ခတွေ့တတ်သည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း များနှင့် မမျှော်လင့်ဘဲ လမ်းခွဲရတတ်သည်။ သားသမီးရှိက အိမ်မှ ထွက်သွားလိမ့်မည်။ ဒီကာလမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမတွေ အထူးသတိပြုပါ။ မွေးလျှင် အခက်အခဲတွေ့နိုင်သည်။ သူ့သဘော သူဆောင် ရလာသောငွေနှင့် လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်အောင် နေပါ။ ဘာမှလုပ်စရာ မရှိပါက ထိုင်နေပါ။ ဥာဏ်ကို ဥာဏ်သုံးလုပ်မှ ဒုက္ခတွေ့တတ်သည်။ အမှု မဖြေရှင်းရပါ။ တတ်နိုင်သလောက် အချိန်ဆွဲပါ။ မဖြစ်မနေ ပြဿနာမှုတွေ ရှင်းရမယ်ဆိုလျှင် အရှုံးပေးလိုက်ပါ။ ငွေဝင်လာလျှင် မြေ၀ယ်ထားပါ။ အိမ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဆောက်ပါနှင့် ဤကာအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသားများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေ ပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။ အိမ်ကဘုရားတွင် ကောဖီ (၁)ခွက်နှင့် ကိတ်မုန့်(၁) ချပ် ကပ်လှူလိုက်ပါ။
ဤလအတွင်း၌ သင်သည် အဘက်ဘက်မှာ စိတ်ချမ်းသာစရာများ ကြုံတွေ့လာရလိမ့်မည်။ ယခုကာလတွင် အိမ်ထောင်ပြုပါက တည်မြဲသော အိမ်ထောင်မဖြစ်နိုင်၊ အိမ်ထောင်ပြုလျှင် သားသမီး ပါလာတတ်သည်။ လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ရတတ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည်လည်း လွန်စွာကျိုးပေး အောင်မြင်မည်။ အလှူအတန်းပြုရခြင်း၊ မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။ အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်သည်။ ရွှေဝင်မည်။ ရတနာပစ္စည်းများ ၀င်မည်။ ဘုရားဆင်းတုတော်၊ ပုံတော်များ ကြွလာမည်။ သင့်အတွက် အလွန်ကောင်းသောနိမိတ် ဖြစ်ပါသည် ဤကာလအတွင်း၌ စီးပွားအလွန်ကောင်းသကဲ့သို့ ကိုယ်ကျင့်တရား အထူးအရေးကြီးသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အမှုအခင်း ဖြစ်နေသူကို ငွေမချေးပါနှင့်၊ အာမခံ မလိုက်ပါနှင့်၊ သတိပြု၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပတ္တမြား မြ ထွက်တတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် အဆင်မပြေ ကြီးစွာဖြစ်တတ်သည်။ သွပ်၊ သံ၊ သစ်တစ်ပတ်ရစ် ပစ္စည်းလက်မခံပါနှင့်၊ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ နာရေးကိစ္စကို အကြောင်းပြ၍ ခရီးသွားရတတ်သည်။ ဆရာသမား ကဲသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်မည်။ လုပ်ဖော် ကိုင်လက်များ မိတ်ဆွေများနှင့် အဆင်မပြေ လမ်းခွဲ ရတတ်သည်။ ယခုကာလတွင် အိမ်ဆောက်လျှင် မကောင်းပါ အစားမှား ဆေးမှားဖြစ်ခြင်း သွားဒုက္ခပေး ခြင်းများ ကြုံရမည်။ မြေကိစ္စ အမွေနှစ်ကိစ္စ များကြုံရ တတ်သည်။ ငွေရှာရ လွယ်ကူပေမယ့် စုဆောင်း၍ မရ၊။ ငွေဝင်လျှင် ကိုင်မထားရ၊ ရွှေဝယ်ထားပါ။ ဤကာလတွင် ကိုယ်စိတ်နှုတ်သုံးပါးကို မဖောက်မပြန် တည်တည် ကြည်ကြည် ထ်ိန်းသိမ်းနိုင်သူတွေ တန်ဖိုးကြီးမားသော ဘ၀သို့ ရောက်နိုင်သည်။ မထိန်းသိမ်းနိုင်သူ အဖို့ ရေနှင့်ထိသော ရွှံ့နွံဘ၀ ရောက်နိုင်သည်။ ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိ လာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ၊ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာ များကို ဂရုစိုက်ပြု လုပ်ပါလေ ။ ယပ်ဖြူ သက်စေ့လှူပါ။ ဘုရားရင်ဘတ်တော် ရွှေချပါ၊ ရေသက်စေ့ကပ်လှူပါ။
ယခုလသည် မိဘကို ကောင်းစွာပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မည့်အချိန် ဖြစ်သည်။ စီးပွားသိသိသာသာ တက်မည်။ သိကြားမ လိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက် များစွာမြင့်တက်သွားလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းများ သိသိသာသာ အောင်မြင်မူရမည်။ လုပ်ငန်သစ်များ စတင်ပြု လုပ်နိုင်သော ကာလ၊ လုပ်ငန်းဟောင်းများ ပြန်ပေါ်တတ်သည်။ ဘုရားဖူးခရီးများ စိတ်ချမ်းသာစရာခရီးများ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများ သွားတတ်သည်။ ၀န်ထမ်းဖြစ်လျှင် ရာထူးတက်ခြင်း အခြေအနေ အဆင့်အတန်း မြင့်တက်ခြင်းများကြုံမည်။ သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်း ပညာကောင်း ရခြင်းများ ကြုံမည်။ မိတ်ဆွေကောင်း ဆရာကောင်များ တွေ့မည်။ အဖိုးတန်စက်ပစ္စည်များဝင်မည်။ မြေကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ ငွေရှာရလွယ်ခြင်း ငွေအ၀င်အထွက် ကြမ်းခြင်းများ ကြုံလိမ့်မည်။ ရပ်ဝေးမှစာများ အဆက်အသွယ်များ ရလာမည်။ ရန်များခြင်း စကားများဖြေရှင်းရခြင်း ရင်နှီးသူများ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် အဆင်မပြေ လမ်းခွဲရခြင်းများ ကြုံမည်။ အထူးသတိပြုရန် အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အနည်းငယ်ကြုံရတတ်သည်။ အမှုအခင်း ရုံပြင်ကန္နားနှင့် ပတ်သက်ရတတ်သည်။ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ အကြီးအကဲ ကောင်းရနိုင်၏။ အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဖက် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ ဆွေမျိုးသားချင်းများ ကျန်းမာရေး အသည်းအသန် ဖြစ်တတ်သည်။ လာမည့် မွေးလ မွေးရက်အထိ အသုဘပို့ခြင်း မပြုပါနှင့် အထူးသတိပြုပါ။ နှလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း။ လေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း ဒူး နား ဒုက္ခပေးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ ပေါ်လိမ့်မည်။ လုပ်လျှင်အောင်မြင်မည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ ၀န်ထမ်းဖြစ်စေ ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်မည့်ကလာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုး ချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါ ယတြာများ ကို ဂရုစိုက်ပြု လုပ်ပါလေ။ ဘုရားဖူးခရီးသွားပါ၊ ခရီးစရိတ်ပြတ်နေသူကို ငွေလှူပါ၊ မွေးနေ့တိုင်း အိပ်ရာရွှေ့ ပြောင်း၍အိပ်ပါ။
အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ ပြင်ဆင်မွမ်းမံရခြင်း ပြောင်းရွှေ့ရခြင်း လုပ်ရတတ်သည်။ အိမ်သစ်ဆောက်လျှင် ကောင်းအချိန် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအသစ်ပေါ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လက်ရှိအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်သစ်များ။ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နာမည်ကောင်းရခြင်း နေရာကောင်းရခြင်း၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရခြင်းများ လုပ်ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်မရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျတတ်သော ကာလဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်သည် ယောက်ျားဖြစ်ပါက အိမ်ထောက်ကျလျှင် ကောင်းပါသည်။ မင်္ဂလာဆောင်လျှင် စည်ကားသော မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မည်။ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ အိမ်သုံးပစ္စည်း ၀င်တတ်သည်။ သူခိုး၊ မျက်စေ့ အကျခံရတတ်သော ကာလဖြစ်၍ သူခိုး အခိုးခံ ရတတ်ကြောင်း သတိပြုပါလေ။ ခရီးအကျိုးပေးသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားဖူးခရီး သွားရတတ်သည်။ ကွဲကွာနေသော ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် ပြန်ဆုံမည်။ ရပ်ဝေးမှ ဆွေမျိုးသားချင်းများ ရောက်လာတတ်သည်။ အိမ်သို့ အတောင်ပါသော သတ္တ၀ါများ ၀င်လာတတ်သည်။ ၀င်လျှင် နိမိတ်ကောင်းသည်။ သွပ် သံ သစ် စသော သောကြာနံပစ္စည်းများ ၀င်လာတတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် မိတ်ဆွေရင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တို့က ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ မြေကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ မြေအ ၀င်မခံရပါ။ မြေ၀င်လျှင် ကြာသပတေးနံ ထုတ်ပစ်ပါ။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သောပစ္စည်း လှူဒါန်းပါ။ ရွှေနှင့် အဖိုးတန် ရတနာပစ္စည်းများ ၀င်လာမည် ဘုရာဆင်းတုတော် စွယ်တော် ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်သည်။ လက်ဝတ်ရတနာများ ကျောက်ပြုတ်ထွက်ခြင်း ပျောက်ခြင်း၊ ဖြစ်တတ်သည်။ အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင် ကြီးစွာကြုံမည်။ အတိုက်အခံမှန်သမျှ အနိုင်ရမည်။ မိသားစု အကြီးအကဲ လုပ်ငန်းအကြီးအကဲ တို့ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဖခင် ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ ထီပေါက်သကဲ့သို့ ငွေများဝင်တတ်သည်။ ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက် ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။ အုန်းထမင်း၊ အုန်းနို့နှင့်ချက်ထားသော ဘဲသားဟင်းကို ဘုန်းကြီးလှူပါ၊ တံခွန်းကုက္ကား မလေးပွား ဂြိုလ်တိုင်သက် စေ့လှူပါ
အလှူအတန်းကိစ္စများ မုချလုပ်ရမည်။ ငွေအစုလိုက် အပုံလိုက် ၀င်လာလိမ့်မည်။ မိမိ၏ အလုပ်မှ လည်းကောင်း၊ ထီပေါက်၍လည်းကောင်း ၀င်လာတတ်သည်။ ဤကာလမျိူးး၌ သာမန်အခြေ အနေမျိုးမှနေ၍ စီးပွားအရှိန်အဟုန် နှင့်တက်ကာ လက်ရှိအခြေအနေထက် အဆပေါင်းများ စီးပွား တက်လိမ့်မည်။ မိမိလုပ်ငန်းများကို အင်နှင့် အားနှင့် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်သင့်သော်လည်း ဖြတ်လမ်း မလိုက်ရန် သတိပေးလိုပါသည်။ မိမိအား ပြဿနာလုပ်နေသူများ ရှိလျှင် အဆင်ပြေသွားမည်။ မသင့်မြတ်သူများနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားမည်။ အဖိုးတန်ကျောက် မျက်ရတနာများ ၀င်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် သောကရောက်ရသော ကာလဖြစ်သည်။ အထက်လူကြီး၊ မိသားစု ကြီးကဲသူများကြောင့် စိတ်ညစ်ရမည်။ အတူနေမိသားစုထဲမှ အကြီးအကဲ အဘိုး အဘွားများအရေးဖြစ်တတ်သည်။ လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ အကျိုးပေး အောင်မြင်မည်။ ခရီးများမကြာခဏ ထွက်ရတတ်သည်။ ထိုခရီးများသည်လည်း အကျိုးပေး အောင်မြင်လိမ့်မည်။ ၀န်ထမ်းဆိုလျှင် ရာထူးတက်ခြင်းအခြေအနေ မြင်တတ်ခြင်း ကြုံရလိမ့်မည်။ ပညာရေးကိစ္စများ သင်တန်းကိစ္စများကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ ရွှေထွက်ခြင်း၊ ရွှေအတွက် ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ အင်္ဂါနံ စိန်၊ စက်ပစ္စည်း ထွက်တတ်သည်။ ရွှေထည်ဝယ်လျှင် အသစ်များသာ ၀ယ်သင့်သည် အပျက် အဟောင်း မ၀ယ်သင့်ပါ။ အထူးသတိပြုရန် အောက်လက်ငယ်သား သားသမီး ထွက်သွားခြင်း၊ ၎င်းတို့အတွက် သောကရောက်ရခြင်းများ ကြုံ ရတတ်သည်။ ဆီးရောဂါ၊ မျက်စိရောဂါများ ဒုက္ခပေးခြင်း၊ အစားမှားခြင်း၊ ဆေးမှားခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ စာရွက်စာတမ်း စာချုပ်ကိစ္စ များအတွက်စိတ်ညစ်ရခြင်း၊ ပစ်စာ တိုင်စာ ရောက်ခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို ကောင်းစွာ အကူအညီ ပေးနိုင်လိမ့် မည်။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ကို စိတ်မ၀င်စားခြင်း၊ အလုပ်ပြောင်းလိုစိတ်များ ကြုံလာတတ်သည်။ အိမ်ဝယ်နိုင်သော် လည်း အိမ်အနားအဆာ မလွတ်၊ အိမ်ဧည့်သည်မပြတ်၊ အိမ်ဆောက်လျှင် တန်းလန်းဖြစ်တတ်သည်။ ခိုင်မာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ထားပါ။ ရရှိသော အကြွေးများကို ယခုကာလတွင် ကြိုတင်စုဆောင်းထားပါ။ သို့မဟုတ်ပါက ဆုံးတတ်သည်။ ဤကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။ ထီးဖြူအသေးသက်စေံနှင့် ထီးဖြူအကြီး တစ်လက်ကို မွေးနေ့နက်တွင် ဘုရားလှူပါ။ အမွှေးနဲ့သာနှင့် ဘုရားအားရေသပ္ပာယ်ပါ။
ဘုရားဆင်တုတော်၊ ပုံတော်၊ ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်သည်။ မထင်မှတ်သော ခရီးများ မရည်ရွက်သော ခရီးများသွားရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးကိစ္စအတွက် ခရီးသွားရတတ်သည်။ လူမျိုးခြားက ကူညီခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ အောင်မြင်ခြင်းများကြုံမည်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်ခြင်း ဘုန်တန်ခိုး တိုးတက်ခြင်းများ ကြုံရမည်။ မနာလိုသူလည်း ပေါ်လိမ့်မည်။ မိမိထက်မြင့်သူနိမ့်သူ နှစ်ဦးလုံးက ဒုက္ခပေးလာတတ် သောအချိန် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ အောင်မြင်တော့မလိုလိုနှင့် အခက် အခဲကြီးစွာ ကြုံတတ်သည်။ အလုပ်တွင် အပျက်စီးအဆုံးရှုံး အလေအလွင့် များနေလိမ့်မည်။ ငွေပျောက်ခြင်း ကြွေးတင်ခြင်း ငွေအတွက် ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ ကြီးကဲသူ အထက်လူကြီးများကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ အလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲ အစီစဉ်များ အထစ်အငေါ့ကြုံခြင်း ရက်ရွှေ့ခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်နေမည်။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြောင်းချင်စိတ်ပေါ်လာမည်။ ပြောင်းလျှင် ပိုဆိုးသွားတတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် ။ အစာအဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခြေထောက် ခါး၊ သွား ဒုက္ခပေးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ ဤလအတွင်း အမှုအခင်း မဖြစ်စေရန် အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ဖြစ်လျှင် မပြီးနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတတ် သည်။ ငွေနှင့်လိုက်လျှင် ရှုံးသွားတတ်ပါသည်။ ပစ္စည်း မဌားရမ်းပါနှင့် ဆုံးလိမ့်မည်။ ဤကာလအတွင်း မည်သည့်အခက်အခဲနှင့် ကြုံသည် ဖြစ်စေ အားကိုး မရှာနှင့်။ ဒုက္ခပေးမည့်သူများသာ ပေါ်လာတတ်သည်။ အောက်လက်ငယ်သား ထွက်သွားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း ကြုံရ တတ်သည်။ ထီကံကောင်းသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ပညာအသစ်တစ်ခု ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေး ညံ့လိမ့်မည်။ ခါး အောက်ပိုင်း ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့သွားရတတ်သည်။ ကျောဒုက္ခေ ပြးခြင်း၊ ကျော၌ရောဂါရခြင်း ဖြစ်မည်။ အိမ်ပြင်၊ အိမ် ဆောင်၊ အိမ်ပြောင်း မပြုပါနှင့်။ အာမခံမလုပ်ပါနှင့်။ စပ်တူအရောင်းဝယ် အကြီးအကျယ် မလုပ်ပါနှင့်။ ဤကာလအတွင်းကောင်းကျိုးချမ်း သာများ ပိုမိုရရှိ လာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေ ပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြု လုပ်လေ။ နေ့စဉ်ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းရေး၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါ။ သောက်ရေအိုး ကိုယ်တိုင် ရေထည့်ပါ။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ပါ။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, February 04, 2013 No comments:
The Voice Weekly ၏ ၂၀၁၃ ဟောကိန်း
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, January 06, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ မြန်မာစာအုပ်, ဗေဒင်
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2013, January လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း
ဟောစာတမ်း အဆုံးမှာ ဆရာဟိန်းတင့်ဇော်ရဲ့ နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကို
၀ိဇ္ဇာမျက်လုံး တားရော့ ဟောကိန်းများ
မျှဝေသူ Unknown မှာ Thursday, December 13, 2012 No comments:
၂၀၁၂-ခု၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
မျှဝေသူ Unknown မှာ Wednesday, December 05, 2012 No comments:
Decembre လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2012, Decembre လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2012, November လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း
မျှဝေသူ Unknown မှာ Tuesday, November 20, 2012 No comments:
2012,September လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, September 09, 2012 No comments:
၇ ရက် သားသမီးများအတွက် စက်တင်ဘာလ ဟောစာတမ်း
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, September 03, 2012
၉ ဂဏန်းပိုင်ရှင်တို့အတွက် အသုံးချ ဂဏန်းဗေဒင်
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, August 19, 2012 No comments:
၉ ဂဏန်းပိုင်ရှင်တို့အတွက် စီးပွားရေး ဟောကိန်း
၈ ဂဏန်းပိုင်ရှင်တို့အတွက် အသုံးချ ဂဏန်းဗေဒင်
မျှဝေသူ Unknown မှာ Saturday, August 18, 2012 No comments: